Ndị na-achọ ịba uru ọhaneze na Illinois Cannabis Legalization Do ruru eru?
Ndị ọrụ ntinye akwụkwọ mmekọrịta ọha na nwanyị & Illinois Cannabis
Kedu ihe bụ ntinye akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọhaneze na mmemme iwu cannabis nke Illinois?
onye ọrụ na-akwụ ụgwọ mmekọrịta mmadụ na Illinois
Dika nyocha emere na steeti Illinois, achoputara na mgbochi nke iwu gara aga emeela ka o siere otutu ndi mmadu ike isonye n’enye ndi oru wii wii, nke a mekwara atughi oke oha nke na-abawanye ubochi. Iwu ọhụrụ nke Illinois chọrọ idozi nke a site na imepụta "Ndị na-achọ ịbawanye mmekọrịta ọha na eze" iji belata ihe mgbochi na-egbochi ndị mmadụ n'oge gara aga ịbanye ụlọ ọrụ si otú a na -emepụta ịha nhatanha na mmekorita iwu nke cannabis na Illinois. Ihe mgbochi ndị a gụnyere enweghị isi obodo n'ihi ịda ogbenye, na ihe ndị ọzọ.
Readgụ iwu - Pịa ebe a
n'ihi na Mpaghara Mpaghara Mmetụta Na - adịghị mma - Pịa Ebe a
“Social hara nziputa" putara na onye na-acho ya bụ onye bi na Illinois na-ezute otu n’ime ihe ndia:
(1) onye anamachọ ihe nwere otu ma ọ bụ karịa njiri mara ma ọ dị karịa 51% onye bidola opekata mpe 5 n'ime afọ 10 bu ụzọ na Mpaghara Mmetụta Ọfụma;
(2) onye anamachọ ihe nwere otu ma obu kariri 51% nwe ya na ikike ya
(i) ejidere maka ikpe, maa ya ikpe, ma ọ bụ tichaa ntaramahụhụ maka ịda iwu ọ bụla tozuru oke ikpochapụ n'okpuru Iwu a; ma obu
(ii) bụ onye otu ezi-na-ụlọ metụtara;
(3) maka ndị na-achọ akwụkwọ nwere opekata mpe nke ndị ọrụ 10, onye na-arịọ akwụkwọ na opekata mpe 51% nke ndị ọrụ ugbu a bụ ndị:
(i) bi ugbu a na mpaghara Arụ Ọrụ; ma obu
(ii) ejidere maka ikpe, maa ya ikpe, ma ọ bụ nwee ikpe ọmụma ọ bụla maka mmebi ọ bụla ruru eru maka mkpochapụ n'okpuru Iwu a ma ọ bụ onye otu ezinaụlọ emetụtara.
Mmelite mmekọrịta nke ndị ọrụ na-elekọta mmadụ na ngwa ngwa
Na Ọktọba 1, 2019 - The Steti nke Illinois weputara ngwa mbube ogwu ya. Ngwa a nwere ụfọdụ asụsụ dị oke mkpa maka ikike ịhazị mmekọrịta mmadụ na ibe gị.
Ọ bụrụ na onye anamachọ chọrọ itinye akwụkwọ dị ka Onye Achọrọ Ibe Akwụkwọ Ọha Social, nye ihe akaebe nke ọkwa Onye Nweta Ọha nke Ọha. Enwere ike guzosie ihe akaebe nke ọnọdụ dị ka Onye Nweta Ọha nke Ọha na Ọha
Ihe akaebe banyere ọnọdụ onye anamachọihe ka “onye bi na Illinois” dị ka akwụkwọ nnabata, ma ọ bụ, ọ bụrụ na itinye ya onwe ya, ọ dịkarịa ala, abụọ n'ime ihe ndị a: (i) nkwekọrịta nkwekọrịta bịanyere aka nke gụnyere aha onye na-arịọ ya, (ii) ihe onwunwe nke gụnyere aha onye na-arịọ ya, (iii) ụlọ akwụkwọ ihe ndekọ, (iv) kaadị ịdebanye aha ndị na-eme ntuli aka, (v) akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala, kaadị ID, ma ọ bụ Onye nwere kaadị nkwarụ, (vi) ụgwọ ego, (vii) ụgwọ ọrụ, ma ọ bụ (viii) ihe akaebe ọ bụla ọzọ. nke obibi ma ọ bụ ozi ndị ọzọ dị mkpa iji guzobe ebe obibi. Ọ ga-abụrịrị mmadụ biri na steeti ahụ ụbọchị iri atọ ka ọ bụrụ “onye bi na Illinois” dịka e si jiri ngwa a.; na
Gosiputa mmadu ma obu mmadu nwere ma obu ijide ihe kariri 51% nke nzuko ikwuputa achoro ebirila na a Mpaghara Mmetụta Ọdịmma maka afọ ise n’ime afọ iri gara aga dị ka egosiri site na, mana ọnweghị oke, akwụkwọ ụtụ, ndebanye aha ndị na-eso vootu, ụgwọ ịgba ụgwọ, ụgwọ ịgba ụgwọ, ụgwọ ọrụ, akwụkwọ mkpuchi, ma ọ bụ ndekọ ụlọ akwụkwọ nke gụnyere aha ndị isi ndị ruru eru na ha; or
Gosiputa ihe mmadu ma obu mmadu nwere ma obu ijide ihe kariri 51% nke nzuko ikwuputa jidere maka, maa onye ikpe mara, ma ọ bụ nwee ikpe ọmụma ọ bụla maka ịda iwu ọ bụla mere ka ọ bụrụ onye tozuru oke mkpochapụ Iwu Ọha 101-0027. Ọ bụrụ n ’njide, nkwenye, ma ọ bụ ikpe amachiri ya, mepụta ihe ndekọ dị otú a; or
Gosiputa ihe mmadu ma obu mmadu nwere ma obu ijide ihe kariri 51% nke ulo nzio ikwuputa achoro a nne na nna, onye na-ahụ maka iwu, nwatakịrị, nwunye ma ọ bụ onye dabere ma ọ bụ onye dabere of onye nke tupu June 25, 2019, ka ejidere ya, ikpe ya ikpe, ma ọ bụ tichie ntaramahụhụ maka ihe ọ bụla emere mmadụ tozuru oke maka ya ngwuputa site na Iwu Oha 101-0027. Ọ bụrụ n ’njide, ikpe, ma ọ bụ ikpe amachiri ya akara, nye ya ihe ndekọ dị etu a. Onye anamachọ a gha aghaghi igosiputa ihe di n’etiti onye isi ocho oru ya ma obu ndi oru ya na onye ejidere ya, ikpe ya ikpe ma obu kpee ya ikpe maka mmebi iwu obula emere ka odoro ya kpochapu site na Iwu Oha 101-0027; or
Ihe akaebe na onye na-etinye akwụkwọ na-arụ ọrụ oge ọrụ 10 ma ọ bụ karịa, yana ihe akaebe na 51% ma ọ bụ karịa nke ndị ọrụ ahụ ga-eru eru dị ka Ndị Ọrụ Nlekọta Ọha na Ọha n'okpuru otu ụkpụrụ enyere maka ihe 2, 3, na 4 dị n'elu, ma ọ bụrụ na ndị ọrụ ahụ ga-eme aka ma jikwaa 51% nke nzukọ a na-ewegara maka ụtụ isi. Onye anamachọ nwere ike ịnye ihe akaebe dị ka akọwara n'elu maka onye ọrụ ọ bụla. Onye ocho oru gha eweputa ihe aka ya na ndi oru ahu na aru oru oge nile di ka ubochi ntinye aka. Ọ bụrụ na ozi onye ọrụ ma ọ bụ ọnọdụ ọrụ nke ndị ọrụ gbanwere tupu e nyeghị ikikere, onye na-achọ ọrụ nwere ọrụ ịgwa ndị Nkebi nke mgbanwe na ozi ma ọ bụ ọkwa onye ọrụ.
More banyere Social hara nhatanha na Illinois Cannabis
Obere ọmiko nke Iwu Mmemme Ahụike Cannabis 2014
Iwu ọmịiko Ahụike Cannabis 2014 nke nyere ohere ị ofụ wii wii ọgwụ nwere oke amachiri ndị chọrọ itinye ego na ụlọ ọrụ wii wii. Omume a bịara na mgbochi nke mere ka o siere ndị mmadụ ike inwe azụmahịa na ngalaba a. Ndi nwe mmadu ole na ole ugbu a abughi ngosiputa onu ogugu ndi steeti n’ihi na o kpuchiri ndi n’enweghi ego ma obu imata etu esi hapu oru n’usoro a.
E guzobere usoro ịha nhatara ọhaneze mgbe a chọpụtara na usoro ịgba akwụkwọ ụgbọelu ahụ bụ ihe mgbasasị. Emebere mmemme a iji nyere ndị tara ahụhụ ahụhụ n'ihi oke cannabis iwu n'oge gara aga. Emere ihe omume a ka o baara ndi bi n’ime ogwugwu uru n'ihi njide metụtara wii wii. Dika iwu ohuru si di,
"General Assembly chọpụtakwara ma kwupụta na ọ dị mkpa iji hụ na ịdị n'otu na izi ezi na itinye n'ọrụ nke Iwu a na steeti niile".
Olee otu Iwu Ọhụụ Ọ ga-esi emetụta Ọchịchị?
Idozi iwu ịjuụ wii wii na ntụrụndụ na Illinois ga-emetụta ndị niile nọ na steeti, ọ bụghị naanị ndị na-eri wii wii. N'ịkpata hụ na enwere nhatanha nke ọha, e mere iwu a iji mee ka ọ dịrị ndị obodo a na-emecha mfe ịnweta ikikere nnabata. Ọzọkwa, onye ọ bụla na-etinye akwụkwọ maka ịha nhatara ọhaneze ga-enweta akara aka karịa nke 20% nke enyere ndị na-arịọ arịrịọ a. A ga-edebanye isi ihe ndị a na klaasị dị iche iche maka ndị na-achọ maka ebe a na-akọ ahịhịa, ọrụ aka, ma ọ bụ na ngalaba.
Dịka iwu siri kwuo, onye na-elekọta ndị na-elekọta mmadụ ga-abụ onye ọ bụla bụ onye bi na Illinois, ebe biri na mpaghara nke steeti na-ezighi ezi na opekata mpe 5 n'ime afọ iri gara aga. Ndị a bụ ebe niile enwere ebe njide, nkwenye, na njide ndị ọzọ mere n'ihi mmebi nke mkpụrụ osisi cannabis n'oge gara aga. Ndi ehichapu ihe edere n'okpuru omume a tozuru oke maka ndi otu.
Kedu nsogbu ndị ọzọ na-elekọta mmadụ ga-agbaso iwu a?
Gwọ ahụ ga-atụle ikike ndị ọrụ nọ na ụlọ ọrụ wii wii. N'adịghị ka n'oge gara aga ebe a kewapụrụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ marijuana, ha ga-enweta otu nchebe ugbu a dịka ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Kedu maka Ego Mmepe Azụmaahịa?
Dika iwu a si di, “emeputara onodu ego nke steeti a iche, nke a gha aputa iche na ndi ozo ekwenti a, ka ejiri mara ya.
Nke a bụ ngwa ọrụ pụrụ iche nke edobere maka ndị chọrọ ịbanye n'ụlọ ọrụ wii wii. Emebere kitty a iji ego, kwado, na ime ka ọ dị mfe maka ndị nwere oke isonyere ụlọ ọrụ wii wii ma ọghọm n'ihe gbasara ego.
Waysfọdụ ụzọ ego a ga - esi nyere aka gunyere:
Chụ ego mgbazinye na obere ọmụrụ nwa. Ndị na-achọ ntinye ego ga-eji ego mgbazinye ego azụmaahịa a iji gosipụta azụmahịa dị ka iwu si dị.
Inye ego na-achụrụ ndị ọrụ ntinye ego nha maka ọhaneze chọrọ ịmalite ma rụọ ọrụ azụmahịa cannabis mana enweghị ike ịkwụ ụgwọ iji mee ya.
Ingkwụ ụgwọ n ’ije ozi maka abamuru nke ndị na-achọ akwụkwọ na-elekọta mmadụ
Kwụ forgwọ maka nyocha emere iji gbaa ndị nwanyị, ndị nwere nkwarụ na ndị obere pere mpe aka n'ime ọha.
Ihe kpatara na Mmemme Mmemme Bụ Ezigbo Echiche
Ndị ejidere ma ọ bụ jidere na-enwekarị mmetụta ọjọọ na-adịte aka. Nke a bụ n'ihi na ọtụtụ ndị ọrụ agaghị eweghara onye ọ bụla nwere ndekọ, ebe ndị ọzọ na-akpa ókè megide ndị bụbu ndị ikpe. N'ezie, ndị ejidere marijuana n'oge gara aga n'ihi ị mariụ wii wii ka na-ata ahụhụ ọ bụrụgodị na e jiri otu ụdị iwu mee iwu. Di na nwunye, umuaka, na ndi ikwu nke nsogbu a na emetuta ahuhu ha na obi mmuo mgbe ikwu na ibe ha no na ulo mkporo.
Ihe mmemme a na-enye ma ikikere ngwa ikikere a na enyemaka ego ndi mmadu nke iwu mmeju nke anwansi na aru ma obu n’adighi.
Onye ruru eru itinye akwụkwọ maka ego hara nhatanha?
Ndị na-achọ inweta ego na-elekọta mmadụ bụ ndị gbadara obere ihe achọrọ iji ruo eru maka ikikere ọnọdụ iji rụọ ọrụ azụmaahịa dị na steeti. Offọdụ n'ime ihe ndị a chọrọ:
Onye bi na mpaghara nke tozuru oke maka ntụrụndụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Idingbido n’okwu a pụtara ịnwe nkwekọrịta bịanyere aka na ya nke nwere aha onye anamachọ ya ma ọ bụ ihe omume.
A ga-eji kaadị ịtụ vootu, akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala, ụgwọ ụgwọ, na ụdị njirimara ọ bụla iji chọpụta ebe obibi.
Kedụ ihe Iwu ahụ kwuru gbasara -kagbu Ebu?
A na-atụlekwa ndị rụkwaara oge iji nweta wii wii na iji ya, n'iwu ahụ dịkwa. Dabere na iwu Illinois ọhụrụ ahụ, ozugbo ejiri akara ma ọ bụ wepụ mmehie ọ bụla, a gaghị achọ ka onye ọrụ kọwaara onye were ya n'ọrụ ihe ọjọọ ha mere. Ihe a o kwuru, emebeghi iwu iji ka amachibido onye were ya n'ọrụ ọrụ. Onye were ya n'ọrụ ka nwere ikike ime nyocha nyocha na iso otu usoro ọrụ ha na-eji maka ndị ọrụ ndị ọzọ.
Kedụ ihe ị na - eme ma ọ bụrụ na I tozuru oke inweta uru na mmemme mmekọrịta ọhaneze?
Obi abụọ adịghị ya na ụlọ ọrụ cannabis na-enye ego buru ibu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmalite azụmahịa na ụlọ ọrụ a wee ruo eruo maka nha anya nhatara mmadụ, ị ga-atụle itinye akwụkwọ gị n'okpuru otu ịha nhatara ọhaneze.
Y’oburu n’iru gi, inwere ike itinye ngwa gi abughi na enwetara gi nke oma kama inwere ike irite uru na ego ndi steeti nwere ike dobe ahia gi ma dobe ya n’iru mpi. Ozi ọma ahụ bụ na ego ahụ abụghị naanị ọnụ ala mana ọnụọgụgụ ndị bi ebe ahụ na-enweghị nsogbu na Illinois.
Kpọtụrụ onye ọka iwu cannabis ruru eru ma ọ bụrụ na ejighị n'aka na usoro ntinye akwụkwọ ahụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ịmaghị etu ị ga-esi baara gị uru nke ọma.
Ederede Akwukwo Ihe Nlere nke Social
Kedu nke na-eme, Abụ m Tom - chọtara m site na iwe iwe ọka iwu Cannabis, wee pịa ebe nrụọrụ weebụ m, ọka iwu ngalaba cannabis. Akụ na ntanetị maka ajụjụ gị niile gbasara ịnyagharị ụlọ ọrụ cannabis - dị ka isiokwu na-ekpo ọkụ taa na Illinois - Ndị chọrọ akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Anyị ga-abanye n'ime ya, ị ga-amata iwu a karịa 99% nke ndị mmadụ ma ọ bụrụ na ị na-elele ruo ọgwụgwụ, na-eburu ihe na-egwu egwu ebe ahụ - mana site na iwu YouTube, aghaghị m ichetara gị ka ị nwee mmasị na ịdenye aha.
Ka anyị dive na.
Nkebi nke 7 nke Iwu ahụ metụtara ndị na-achọ ịha nhatara ọhaneze - mana anyị enweghị ike ịbanye na ebe ahụ - mbụ anyị kwesịrị ịtụle nkọwa nke onye na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe n'okpuru iwu Illinois - maka anyị gaa kọwaa.
“Ndị Na-etinye ego na-elekọta mmadụ” putara na onye na-achọ akwụkwọ nke bụ onye bi na Illinois nke na-ezute otu n'ime njirisi ndị a:
You hụrụ ihe dị iche - obere ụlọ ọrụ chọrọ ma “ikike na njikwa” nke ndị na-achọ ịba ama mmadụ, mana nnukwu ụlọ ọrụ chọrọ ọnụ ọgụgụ nkịtị nke ndị ọrụ. Mgbe ahụ ị ga - ejide njikwa na njikwa ọ bụla ịchọrọ.
N'aka nke ọzọ, kọmitii ndị isi - ndị nwe ụlọ na ndị na-ahụ maka njikwa ụlọ ọrụ na-aghọ ndị na - ewuli otu egwuregwu - enweghị ike ichere inyere gị aka na nke ahụ.
Ugbu a anyị matara ihe ndị na-achọ inweta ego ọhaneze bụ - gịnị kpatara anyị ji chọọ ịbụ otu n’ime ha? N'ihi na iwu masịrị ha n'ụzọ abụọ doro anya: 2) site na ịnye opekata mpe 1% nke isi ihe maka akara azụ na ntanetị ọrụ na 20) site na ịnye ohere ịnweta ego mgbazinye gọọmentị dị ala iji belata ihe mgbochi ịbanye na ahịa cannabis iwu. .
Ngalaba 7-10 nke iwu cannabis ọhụrụ mepụtara Nzụkọ Mmepe Cannabis iji nye ndị na-achọ nkwado ego na-akwụ obere ọmụrụ nwa iji kwụọ ụgwọ mmezu azụmaahịa achọrọ iji rụọ ọrụ azụmahịa cannabis ha.
Ọzọkwa, a ga-enweta “ndị na-achọ ịha nhatanha ọha ruru eru ịkwụ ụgwọ maka mmezu azụmaahịa nkịtị na nke dị mkpa iji bido ma rụọ ọrụ azụmahịa cannabis ha.
Kedu ihe bụ “onye ruru eru inweta ego na-elekọta mmadụ”? Anyị laghachi azụ na nkọwapụta ịchọpụta na ọ bụ:
Akwụkwọ anamachọihe nke ego ruru eru ruru eru nke a ga-enye ndị ọrụ ikike inwetara ikike ka enyekwara ndị ọrụ ego aka.
Akwa - kedu “ikike ịnara ọnọdụ”?
“Ọnọdụ Ikike Nkesa Ndị okenye N'ọnọdụ Nọmba” pụtara ikikere enyere ndị na-achọ akara maka akara ikike maka ikike ịga akwụkwọ n ’ndị okenye nwere ikike inye ndị okenye ikike ikesa ikike nzukọ otu ihe ma ọ bụrụ na onye anamachọzu ihe ụfọdụ akọwapụtara na Iwu a. onye nata ga-ebido ịzụta ma ọ bụ ree mkpụrụ osisi cannabis ma ọ bụ ngwaahịa cannabis.
Ọ dị mma, nkesa na enwetara, mana tupu oghe emepe - Cool… ị nwere ike ịgbalị inweta enyemaka ma ọ bụrụ na onye na-enyocha mmekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-enwetara gị ikike ... mgbe ahụ, ị ​​na-etinye akwụkwọ maka onyinye ahụ ... mgbe ahụ ị na-ewu mgbe ahụ na-emeghe .. Anyị nwere ike ịmalite cannabis ma nweta ego a? Ka anyị lelee.
Na na jụụ, enwere ikikere ịkụ mkpụrụ osisi na ya.
“Akwụkwọ ikike ikikere nke ndị okenye ihe n’ ọnọdụ ibipụta akwụkwọ ikike maka ikike ị nweta ogo ikike ngbasa ozi nke ndị toro eto nwere ikike ịnwe ikike ikikere nzụlite ndị okenye ma ọ bụrụ na onye anamachọ ahụ na-emezu ụfọdụ ọnọdụ dịka Ngalaba Ọrụ Ugbo kpebiri. , mana ekwesighi inweta onye ga-anata ya ka ọ na-eto, na-ahazi ya, ma ọ bụ na-ere mkpụrụ osisi cannabis ma ọ bụ ngwaahịa ndị a na-enweta.
Ọ dị mma ole ikikere ole dị? 30 - Ajụkwa mmụọ, mana chere ka ndị egwuregwu dị ugbu a nweta nna nna, yabụ ole ka ndị ahụ bụ, 20 - mkpụrụ, dịkwa mma, anyị agbadaruola 10. Ọ bụ aka nri.
Ikekwe ọ dị njọ karịa nke ahụ n'ihi na,
Nkebi nke 20-15. Ngwa nke ultgba Ọkụ na Ọnọdụ Ọnọdụ. (a) Ọ bụrụ na Ngalaba Ọrụ Ugbo na -ewepụta ikike ikikere etiti ịkụzi ihe dị ka nkebi nke 20-5, ndị na-achọ akwụkwọ ikike iji ikike ngbasa nke Ọnọdụ ga-enyefe ndị a n'ụdị dịka Ngalaba Ọrụ Ugbo nwere ike iduzi:
Yabụ na ka ndị toro eto na-eji ihe ọkụkụ na-eme, ihe karịrị atụmatụ iri ugbu a chọrọ ịbịa n'ịntanetị, ntanetị, yabụ ka anyị lekwasị anya na ntinye ego ndị ahụ wee hụ ụdị ego dị.
(c) Mbinye ego emere n'okpuru Nkebi a:
(1) a ga-eme naanị ma ọ bụrụ na, na mkpebi nke Ngalaba ahụ, ọrụ ahụ na-eme ka ebumnuche ndị ọzọ dị na Iwu a guzosie ike; na
(2) ga-anọ n'ụdị isi na ụdị a ma nwee ụdị okwu na usoro ndị a n'ihe metụtara nchekwa, mkpuchi, mkpesa, ebubo enweghị nchedo, usoro ndabara, yana ihe ndị ọzọ dịka Ngalaba ga-ekpebi ihe kwesịrị ekwesị iji chekwaa ọhaneze ma nwegidesie ike na ebumnuche nke Ngalaba a. Usoro na usoro a nwere ike na-erughị ihe achọrọ maka mgbazinye ego yiri nke Iwu a anaghị ekpuchi.
(d) A na-enye onyinye ego n'okpuru Nkebi a site na asọmpi na kwa afọ n'okpuru Iwu Mmefu na Nzuzo Grant. Onyinye ego emere n'okpuru Nkebi a ga-ewelie na ịkwalite ebumnuche nke Iwu a, gụnyere nkwalite nke Ndị Na-achọ Ndị Ọha na Ọha na Ọha, ọzụzụ ọrụ na mmepe ọrụ, yana enyemaka teknụzụ maka Ndị Ọrụ Nha Ọha na Ọha.
Yabụ na nke ahụ na-eduga anyị n'ajụjụ - anyị na-eji ngwa kacha mma, yabụ anyị chọrọ inwe isi ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mana anyị na-etinye usoro ntinye akwụkwọ na ngwa - anyị kwenyere na ị ga - ebuli isi ihe ndị ahụ elu.
20% nke ngwa gị ga-abịakwute gị dị ka onye na-ahụ maka ị nweta ego ọhaneze. Mana ọ dị ka ọtụtụ mmadụ tozuru oke, ihe karịrị 800,000 mepere emepe maka iwu, yana ndị bi n'ime obodo dara ogbenye - mana kedu ihe nkesa gị wetaara obodo ahụ iji nyere aka idozi nsogbu nke agha ọgwụ? Nke a bụ ebe akụkọ ụlọ ọrụ gị niile nwere ike ịmị mkpụrụ ma weta mgbanwe n'obodo.
Ndị a kwesịrị ịbanye na usoro ọzụzụ gị na mgbasa ozi obodo. Chee ma ọ bụrụ na ebe nrụọrụ gị na-akwụ ụgwọ na-akwado olulu mmiri na ọrụ ngosi kwa afọ? Na mmekorita ya na ndi otu ulo ahia ya na ulo oru cannabis choro ndi okacha amu.
Ndị ahụ bụ ihe ụlọ ọrụ gị - ọkachasị ma ọ bụrụ na ị ga - eleba anya n'ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya - ga-echebara echiche mgbe ị na-etinye akwụkwọ ikike akwụkwọ cannabis.
Bank na-etinye ego na mgbazinye ego? - ụzọ adịghị. I nweghi ikike inweta ego, ma obu inye ego - ikwesiri iru eru. Inwe ego n’usoro n’otu n’otu. Ngwa a ga-adị ọnụ ahịa maka ibugharị n'ihi oke ha - na agbanyeghị ihe ụfọdụ ndị kwenyere, ndị ọka iwu kwesiri ịkwụ ụgwọ maka oge na ọrụ ha. Karịsịa ma ọ bụrụ na onye ọka iwu gị nwere ọkaibe nke azụmahịa iji nwee onyinye nke onwe ya karịa nde nde ise na ọkacha mmasị maka ndị ọzọ itinye akwụkwọ n'aka ndị na-achọ ịha nhatanha
Daalụ maka isonyere m na ihe omume a - cheta, igbo wii wii bụ naanị ọnwa ole na ole - yabụ bido itinye atụmatụ gị maka ndị nkesa & ịdenye aha iji kwupụta ụbọchị. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka m, naanị onye ọka iwu google cannabis wee kpọtụrụ m. Ka ahụ oge n'adịghị anya.
The Iwu ọmịiko nke Cannabis Pilot Mmemme Iwu Ahụ nke nyere ohere ịjuụ wii wii ọgwụ nwere ike ịkpa oke megide ndị chọrọ itinye ego na ụlọ ọrụ wii wii. Omume a bịara na mgbochi nke mere ka o siere ndị mmadụ ike inwe azụmahịa na ngalaba a. Ndi nwe mmadu ole na ole ugbu a abughi ngosiputa nke onu ogugu nke steeti n’ihi na o kpochiri onye obula n’enweghi ikike ma obu ihe omuma banyere otu esi ewulite ulo oru a.
E guzobere usoro ịha nhatara ọhaneze mgbe a chọpụtara na usoro ịgba akwụkwọ ụgbọelu ahụ bụ ihe mgbasasị. Emebere mmemme a iji nyere ndị tara ahụhụ ahụhụ n'ihi oke cannabis iwu n'oge gara aga. Emere ihe omume a ka o baara ndi bi n’ime ogwugwu uru n'ihi njide metụtara wii wii. Dika iwu ohuru si di, "General Assembly chọpụtakwara ma kwupụta na ọ dị mkpa iji hụ na ịdị n'otu na izi ezi na itinye iwu a n'ọrụ na Steeti niile."
Idozi iwu ịjuụ wii wii na ntụrụndụ na Illinois ga-emetụta ndị niile nọ na steeti, ọ bụghị naanị ndị na-eri wii wii. N'ịkpata hụ na enwere nhatanha nke ọha, e mere iwu a iji mee ka ọ dịrị ndị obodo a na-emecha mfe ịnweta ikikere nnabata. Ọzọkwa, onye ọ bụla na-etinye akwụkwọ maka ịha nhatara ọhaneze ga-enweta ntụpọ ego 25 n'otu oge. A ga-edebanye isi ihe ndị a na klas dị iche iche maka ndị na-achọ akwụkwọ na-elekọta mmadụ na ndị dabere na Illinois.
Ihe kpatara Mmemme Mmekọ Ọha na Ezigbo Echiche
Kpọtụrụ ndị a ọkàiwu cannabis ruru eru ọ bụrụ na ejighi n'aka na usoro itinye akwụkwọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ịmaghị etu ị ga-esi rite uru na isi ahịa nhatanha ọhaneze gị.